Sirna Abbaa Gadaa -
bilisummaa March 9, 2014	Leave a comment
Kan mallattoo odaa
Odaa jala taa’uu galmaa
Seeratu jalatti tumamaa!
Dabareen walfilaa gadooma
Mirgatu akkasitti eegama.
Gadaan moo’ee kalee
Lubni buttaa qalee
Aangoo fudhatee galee.
Waggaa saddee gadoomee
Aangoon gadaa kennamee
Gadaan shanitti hiramee.
Har’a maalif badaa?
Sirni abbaa gadaa
Dimokiraasii jettee Giriik maqaa
Kan Oromootii dimokiraasiin haqaa
Seenaa kaleessaa isinumti laalaa
Dimokiraasiin ka Oromoottu caalaa!!
Previous An Open Letter to Obbo Leenco Lata
Next Obboo Juneeddii Saaddoo gara uummata isaatti deebi’uuf fedhii fi carraa qabaa?